I-Rusty Hinge Cabin 2 - I-Airbnb
I-Rusty Hinge Cabin 2
Le ndlu yamaplanga yindawo yokuhlala yakudala enebhedi enkulu enye, igumbi lokuhlambela elinebhafu epheleleyo kunye nekhitshi elincinci. Eyona ndawo intle nelula yokuphola intloko yakho uze uhlale ushushu ngoxa utyelela iintaba ngeli xesha. I-WiFi nefowuni ziyafumaneka. Nceda ufunde zonke iinkcukacha ngaphambi kokubhukisha. Le dolophu incinci. I-Cooke ikumgama weemayile eziyi-4 ukusuka eNortheast Entrance ukuya eYNP. Akukho venkile yokutya. Akukho nkonzo yefowuni kwiSixeko saseCooke. Ikhitshi elincinci alilo ikhitshi elipheleleyo. I-WiFi ingaba yindawo ebalaseleyo.
Kanye kwindlela ephambili kwiSixeko saseCooke kwaye kufutshane neSaloon Yabancinci, le ndlu yamaplanga itofotofo yindawo yayo yokuhlala phakathi kwezinye izindlu zamaplanga ezintlanu ezifanayo, kwaye ayinazo naziphi na iindonga kunye nayo nayiphi na enye indawo yokuhlala. Indawo entle phambi kwendlu yamaplanga inendawo yokulungisa izitulo zakho zokukhempisha uze uphumle nabahlobo. Le ndlu yamaplanga yindawo yokuhlala esemaphandleni enendawo entle yokuphumla kubomi obuxakekileyo. Yonwabela umatrasi omtsha oqinileyo we-memory foam ogcweleyo kunye nentaba entle ephandle efestileni. Ilungele ukudibana nencwadi entle oza kuyifunda. Iti, isepha, ishampu, i-conditioner kunye nephepha ziyafumaneka. Kukho iitawuli eziyi-2 ezinokusetyenziswa ziindwendwe. Iingubo namashiti ongezelelekileyo anokucelwa ngu Ikhitshi elincinci linezitya ezimbalwa, i-microwave, ipleyiti eshushu kunye nefriji encinci. Igumbi lokuhlambela evuleke kakhulu linebhafu epheleleyo/ishawa, indlu yangasese nesinki. Le ndlu ihleli kumhlaba ogudle ihlathi lesizwe, ngoko ukuhlala apha kuthetha ukuba uza kubona indawo entle xa ukwicango langaphambili! I-WiFi kunye nefowuni esetyenziswa nangabanye abantu eMerika ziyafumaneka. Izitrato ezithile zivaliwe ngamaxesha athile onyaka ibe azifikeleleki kwiSixeko saseCooke, eMt. Nceda wenze uphando lwakho ngaphambi kokubhukisha. Kukho inkcazelo eninzi enikezelweyo kwiinkcukacha zendlu.
ICooke City yidolophu encinci esecaleni ezintabeni apho ukukhwela ekhephini kuthandwa kakhulu phakathi kukaNovemba noAprili ebusika. Le dolophu, engaphandle nje komntla-mpuma ekungenwa kuyo kwiYellowstone National Park ibe ingqongwe Ngamahlathi Esizwe, le dolophu yeyona ndawo iphambili yokuphola kwindalo; kangangokuba akukho nkonzo yefowuni apha. Ukutyibilika ekhephini kunye nezinye izinto ezenziwayo ebusika, kunye nokufotwa, nazo ziyathandwa. Abantu banobuhlobo ibe kumnandi ukufumaneka kwenye yeebhari/iivenkile zokutyela suku ngalunye. Kukho nemyuziyam ecocekileyo kwiZiko Labahambi. I-Sweet Pea Grocery kunye neNgqungquthela, kwaye Yeka Imoto ziivenkile ezimbini ezincinci ezifanele ziyeke. Hlala ujonge iigalari zobugcisa zasekuhlaleni kunye nabaculi! Ngexesha lasebusika iCooke City kukuphela kwendlela ephakamileyo, yindlela kuphela kwiYellowstone National Park evuliweyo ngelo xesha. Ixesha lonyaka elixakekileyo liphakathi kukaJuni noSeptemba. Ukuba uya kwiSixeko saseCooke ngaphandle kwexesha lonyaka elixakekileyo, lungela iivenkile zokutyela ezimbalwa kunye/okanye iiyure ezimfutshane.
Ndisekule dolophu ibe ndifumaneka iintsuku ezininzi ukuze ndikuncede okanye ndilungise naziphi na iingxaki. Ndifowunele okanye undithumelele i-imeyile ukuba ufuna nantoni na, ndithetha oku ngeyona ndlela inyanisekileyo. Xa kuza kuhlalwa iintsuku eziyi-3 nangaphezulu, omnye wethu uza kuyisebenzisa indlu yamaplanga ukuze ithathe inkunkuma ize igcwalise iitawuli ezisetyenzisiweyo. Ngokuqhelekileyo asiyi kudibana nawe, kodwa ukuba ungathanda ukudibana nathi, siyakuvuyela ukusamkela eso sicelo!
Ndisekule dolophu ibe ndifumaneka iintsuku ezininzi ukuze ndikuncede okanye ndilungise naziphi na iingxaki. Ndifowunele okanye undithumelele i-imeyile ukuba ufuna nantoni na, ndith…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Cooke City